Dell Advanced 4k bụ 100-inch, 120 Hz, 4k mma laser projector | Akụkọ akụrụngwa
Mgbe o yiri ka ejiji maka nnukwu ákwà gafere, ọ na-adị ka ọ bụrụ na ịnweghị ihu igwe iri ise na ise ma ọ bụ ihe ngosi nke anụ ọhịa, ị nweghị mmasị na teknụzụ. Fewbọchị ole na ole gara aga, m na-agagharị na ebe a na-ere ahịa, ahụrụ m telivishọn 55-inch nke nwere 85k mma site na Sony, telivishọn nke gbanahụ akpa nke ọtụtụ ndị ọrụ, ebe ọ nwere ọnụahịa nke 4 euro (euro iru 8999 dị ezigbo mkpa…). O doro anya na ọ bụghị mmadụ niile dị njikere imefu ụdị ego ahụ, mana ọ bụrụ na anyị nwere mkpa ịnweta nnukwu ihuenyo, anyị nwere ike họrọ ihe nyocha, nke Dell gosipụtara na-aga n'ihu.
Dell eweputara oru ohuru nke laser nke na-enye anyi mkpebi nke ihe ruru 100 sentimita asatọ na ogo 4k ma dakọtara na HDR. N'ezie, ị ga-achọ nnukwu ụlọ iji nwee ike idobe ihe nrụpụta ahụ nke ọma ka ị nwee ike ịnụ ụtọ ụdị ọ na-enye anyị. Ọ bụ ezie na Dell haziri ngwaọrụ a maka ebe agụmakwụkwọ ma ọ bụ ụlọ ọrụ, ebe nha dị mkpa, na sentimita 100 na-enyere aka nke ukwuu, ngwaọrụ a Ọ na-enye anyị ọtụtụ elele ma ọ bụrụ na anyị chọrọ iji ya na nnukwu ụlọ obibi anyị.
Iji nwee ike ịnụ ụtọ elekere 100 nke ihe ngosi a na-enye anyị, ọ dị mkpa itinye ya 10 centimeters site na mgbidi ahụ. Ọzọkwa site n'inye teknụzụ laser, anyị ekwesịghị ichegbu onwe anyị banyere bọlb ọkụ ndị dị oké ọnụ na agbasaghị nwere a elu price mgbe ụfọdụ karịa ihe projector n'onwe ya.
Dị ka onye nrụpụta si kwuo, site na iji ihe ngosi a maka awa 8 kwa ụbọchị ụbọchị ise n'izu, anyị nwere ike ịbụ na-eji ya afọ 10, okwu karịrị oke iji nwee ike mezie dollar 5.999 ọ na-efu. N'oge a ga-ere ya na United States site na July 19, yabụ ndị anyị na-ebighi ebe ahụ ga-eche ma ọ ruru mba ndị ọzọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » Ngwa » Dell Advanced 4k bụ 100 inch, 120 Hz, 4k mma laser projector